Laydhka Hawlgalka ee saqafka laguma dhejin karo AMA Qol leh Dherer Dhererkiisu hooseeyo?
Sannado badan oo iib iyo khibrad wax soo saar ah, waxaan ogaanay in macaamiisha qaarkood ay aad u jahwareersan yihiin markay iibsanayaan nalka shaqeeya. Nalalka saqafka shaqeeya, dhererkiisa rakibidda ugu habboon waa 2.9 mitir. Laakiin Japan, Thailand, Ecuador, ama qaar ...
Markay macaamiisha ajaanibta ahi dhahaan weligay maan iibsan nalkaaga shaqada, tayadiisu miyaa lagu kalsoon yahay? Mise waad iga fogtahay. Maxaan sameeyaa haddii ay jirto dhibaato tayo leh? Dhamaan iibka, waqtigan, waxay kuu sheegi doonaan in alaabtayada ay yihiin kuwa ugu fiican. Laakiin miyaad runti aaminsan tahay? Professio ahaan ...
Casriyaynta alaabada ee cudud fidsan
Badeecad, kaliya iyada oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo, macaamiisha ayaa lahaan kara khibrad adeegsade wanaagsan. Marka loo eego jawaab celinta isticmaalaha iyo soo bandhigida tikniyoolajiyadaha cusub, waxaan cusbooneysiinnay cududda fidsan (gacanta wareegsan ama gacanta jiifka ah) ee nalka saqafka ka shaqeeya. ...